Pacman: otu esi egwu egwu site na nzọụkwụ
Iji kpọọ egbe n'ịntanetị n'efu, naanị ị ga-egwu egwu soro ntuziaka ndị a nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Ozugbo ị banyere saịtị ahụ, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Kwesịrị naanị kụrụ egwuregwu na ị nwere ike ugbu a na-amalite na-ahọpụta nhazi na-amasị gị. Ozugbo i meriri egwuregwu ị nwere ike ịkwa ọkwa. Enwere ngụkọta nke ọkwa iri abụọ na anọ.
Ugbu a, ị ga-ahụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", Nye bọtịnụ"Play"Ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"na"Malitegharịa ekwentị”N’oge ọ bụla.
Ọ na-achịkwa iri nri swiiti ọ bụla n’agaghị eri ya.
Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "Malitegharịa ekwentị" ịmalite ọzọ.
Mmalite nke comecocos
Pac-Man bụ agwa egwuregwu ewu ewu site na XNUMXs. Ndi E gosipụtara ụwa na egwuregwu vidio na mba Japan na May 1980, XNUMX. Egwuregwu ahụ rutere na US ọnwa 5 ka e mesịrị wee rute akara 000 e rere akara ngwa ngwa.
Ewezuga ụdị arcade ahụ, ahaziri Pac-Man maka XNUMX Atari. Kemgbe ọtụtụ afọ, egwuregwu enwetawo ọtụtụ na ọtụtụ nke emelitere nsụgharị nke kasị oge a consoles. Na Brazil, agwa a bịara mara dị ka Bịa-Bịa bụkwa ihe ịga nke ọma.
N'elu ihe ọ bụla, n'echiche nke egwuregwu ahụ bụ ilekọta njirimara na-acha odo odo na-eri mbadamba na maze. N'otu oge ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-agbanahụ site na 4 ekiri na-anwa imeri ya.
Namco chọrọ okwu dị iche na egwuregwu ndị na-agba ụta, otu oge n'oge ahụ. Na mbu, Iwatami choputara na o nwere mkpali maka agwa ya site n’ile Pizza n’enweghi iberi.
Agbanyeghị, mbido agwa a nwekwara ụdị ọzọ. Dị ka Iwatami n'onwe ya si kwuo, ọdịdị nke Buru sitere n'ike mmụọ nsọ ndị Japan dere okwu ahụ bụ "kuchi", ọnụ.
Ozugbo e kere ya, a maara agwa ahụ dị ka Buru. Na Japanese, nsupe puck na pac bụ otu ihe ahụ, paku. Dabere na akụkọ ifo nke mba ahụ, amaara na Paku nwere nnukwu agụụ. Na mgbakwunye na nke a, okwu ahụ na-arụ ọrụ dị ka onomatopoeia imeghe ma mechie ọnụ mgbe ị na-eri nri.
N'aka nke ọzọ, aha Puck na-ada ụda dị ka taco na Bekee. Ya mere, mgbe ebutere egwuregwu ahụ na US, Namco họọrọ ịkpọ ya Pac-Man.
Ọ bụ ezie na e hiwere ya na mbụ na Japan, ọ bụ mgbe mbata na US ka ọ hapụrụ akara na ọdịnala pop. Ọganiihu nke egwuregwu ahụ dị ịtụnanya na naanị afọ iri nke ibipụta akwụkwọ wepụtara otu ijeri dollar, naanị n'ime ụlọ egwuregwu na US.
N’afọ iri na-abịanụ, ọnụ ahịa karịrị okpukpu abụọ, na-eru ijeri US $ 500. Taa, aha ikike emeela ihe ruru ijeri iri na atọ n'ụwa niile. Nke a pụtara na ọ bụ naanị ndị na-awakpo Space (karịa ihe ruru ijeri dollar XNUMX) karịrị ya na ndepụta nke kacha baa uru na mbara ala.
Kemgbe ụdị mbụ dị na arcades, Pac-Man emeriwo ihe karịrị iri atọ. Omume ahụ ka na-egosi na egwuregwu ndị karịrị aha ya. Na Super Smash Bros, iji jee ozi dị ka ihe atụ, enwere ike ịhọrọ bọọlụ edo edo dịka otu n'ime ndị agha ahụ.
Gịnị bụ Pacman?
Buru bụ egwuregwu kọmputa kere site Tōru Iwatani ụlọ ọrụ Namco. Na mbụ emepụtara maka Arcade na 80s, ọ ghọrọ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na egwuregwu kachasị egwu taa, yana ụdị nke oge a maka ọtụtụ njikwa na usoro maka ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ egwuregwu dị mfe: onye ọkpụkpọ bụ a mechie ọnụ ya na ọnụ ya nke mepere ma mechie, tinye na maze juputara na mbadamba na ikiri egwu anọ dakwasịrị ya. Ihe mgbaru ọsọ bụ rie mbadamba nkume obula n’enweghi mmuo, na ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu nke mgbagwoju anya.
Pac-Man bụ otu n'ime ndị a hụrụ n'anya na ndị a maara nke ọma na egwuregwu egwuregwu vidiyo nke XNUMXs. Ihe akaebe nke a bụ na ọ bụ ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto, ndị na-emeghị egwuregwu ya.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke a anyaukwu obere odo agwa, lee anya na ụfọdụ na-adọrọ mmasị na-enweghị isi banyere aha ya.
Ebumnuche nke egwuregwu
Ebumnuche nke egwuregwu bụ eri ọ bụla na maze taịl nile na-enweghị na-kụrụ na mmụọ nsọ. Mgbe ị na-adaba na mbadamba, Buru loda ya ma ghapu na oke. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ riri taịl nile na otu maze, onye ọkpụkpọ ahụ gafere ọkwa ahụ. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-eri nke ọ bụla n'ime taịl nile na nke ọ bụla n’ime free mazes, ọ meriri egwuregwu ahụ.
Naanị mmegharị nke onye ọrụ na-achịkwa bụ na-agagharị site na igodo ntụziaka na-eche ihu n'ihu, ihu azụ, aka ekpe na aka nri, n'ebumnuche nke izere ihe nkiri ahụ ma rie mbadamba nkume ndị gbasasịrị gburugburu.
Mgbe ihe nkiri na-adabakọ Buru na-anwụ, si otú ahụ na-efunahụ ndụ. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ndụ abụọ ọzọ, nke egosiri na ogwe aka nke ihuenyo. Mgbe ị tụfuru ndụ ma jiri ndụ ọzọ, ọnụọgụ ọgwụ nke fọdụrụ na usoro ahụ agbanweghị site na oge ọnwụ Buru, onye obula laghachi na onodu mbu nke uzo.
N'ọnọdụ dị otú a, iji mejupụta ebe (ma ọ bụ egwuregwu), ihe ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ichegbu onwe ya banyere mbadamba ndị ọzọ. Mgbe onye ọkpụkpọ egwu tụfuru ndụ ha site na ijikọ ndị na-ekiri egwu, ha na-atụfu egwuregwu ahụ.
Ọsọ nke ụdịdị dị iche iche na Buru bụ otu ihe ahụ, mana, dịka ọ dị na egwuregwu mbụ, mbadamba nkume na-ebelata ihe nkiri site na pasent pasent ma hapụkwa Pacman rie ha.
Mgbe a na-eri ha, naanị "anya mmụọ" fọdụrụ, nke ga-alaghachi n'etiti labyrinth, ebe foduru nke ihe nkiri ahụ ga-abụ ihe nkiri nke ga-ezute ọzọ Pacman. Na nke ọ bụla na ogbo nwere anọ ibu mbadamba. Onye nrụpụta na-ekpebi oge mbadamba nkume ga-adịru.
Mbadamba ụrọ ọ bụla eripịrị ọnụ ahịa kwesịrị uru iri, nke ọ bụla nnukwu mbadamba nkume riri uru otu narị isi, na ụdị egwu ọ bụla bara uru dị narị isi abụọ. The egwuregwu ga-adịru dịkarịa ala 2 n'ụzọ.
Mgbe ọ na-eke egwuregwu ahụ, Toru Iwatani chọrọ ịdọta ụmụ nwanyị na-ege ntị na usoro adịghị ike na ime ihe ike. N'agbanyeghị nke a, ụlọ egwuregwu na-abụkarị ohere nwoke. Ya mere, onye nrụpụta chọrọ iji mepụta nhọrọ ọzọ.
Otú ọ dị, ihe ngwọta ahụ wụpụrụ n'ụzọ na-atụghị anya ya. Ihe ịga nke ọma nke Pac-Man mere ka okike nke egwuregwu Crazy Otto. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu egwuregwu na ụdị nwanyị nke ọdịdị mbụ, egwuregwu ahụ enweghị njikọ na Namco.
Yabụ, Midway, onye nwere ikike Pac-Man na USA, mechara zụta Crazy Otto ma wepụta ya n'okpuru aha Ms. Pac-Man. Egwuregwu ahụ wetara ihe ọhụụ dịka ọhụụ ọhụrụ na ọsọ ndị ọzọ.
N'oge na-adịghị anya mgbe ihe ịga nke ọma na egwuregwu ahụ gasịrị, ikike ahụ nwetara traction na mgbasa ozi ndị ọzọ. Na iri na itoolu na iri asatọ na abụọ, uma merie a version nke animated usoro a na-akpọ Paka-nwoke ahụ ọkụ. Ọ bụ Hanna-Barbera mepụtara ihe a, onye na-ahụ maka ụdị ọdịnala dịka Flintstones na Jetsons.
Na mgbakwunye na nke a, agwa bụ anụ ụlọ nke mbụ egwuregwu vidio. Kemgbe ọ pụtara na mbụ, ọ nwere akara ngwaahịa dịka ụmụ bebi, t-shirts, akpa azụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ ghọrọ ngwa ngwa otu aha egwuregwu kachasị amara na mpụga nke mgbasa ozi.
N'ikpeazụ, mmetụta ya na mbara ala egwuregwu dị ọbụna na ndị dere GTA kwuru na egwuregwu ahụ dị ka ya Buru. Dị ka ndị mmepe ahụ si kwuo, egwuregwu 2 ahụ bụ ihe odide na-aga n'ihu na isi na maapụ (ndị na-agagharị agafe / mbadamba) ebe ndị na-emegide ya (ndị uwe ojii / mmụọ) na-achụ.
Inweta ihe omuma banyere Pac-Man
Egwuregwu mbụ, site na iri na itoolu na iri asatọ, bụ otu n'ime iri na anọ bụ akụkụ nke mkpokọta nke egwuregwu si New York City Museum nke Oge A Art.
Pac-Man bụ egwuregwu mbụ gụnyere ndị na-arụ ọrụ ike nwa oge site na mmewere. Echiche sitere na mmekọrịta Popeye na akwụkwọ nri.
Onye ọ bụla n’ime ndị na-emegide egwuregwu ahụ nwere àgwà dị iche. Nke a ga-edo anya mgbe anyị lere aha ha n’asụsụ Japanese: Uhie oikake (Alkgha), Machibuse pink (Ambush), Kimagure acha anụnụ anụnụ (Ejighi n'aka) na Otoboke oroma (Iberiibe). Na Bekee, a sụgharịrị aha ndị ahụ Blinky, Pinky, Inky, na Clyde.
Ọ bụ ezie na egwuregwu enweghị njedebe, ị nwere ike ịnwe egwuregwu zuru oke. Gosiri na mechaa narị abụọ na iri ise na ise na-enweghị ịlafu ndụ ma chịkọta ihe ọ bụla na egwuregwu ahụ. Na mgbakwunye na nke a, a ga-eri ọrụ ọ bụla na ụdị ikike ọ bụla.
Iji kwanyere aha aha egwuregwu ahụ, Google depụtara otu nsụgharị pacenti na-egwu egwu na ncheta XNUMXth nke egwuregwu ahụ.